မသက်ဇင်: ဆာရီယာယ်လစ်ဇင် ကြေညာစာတမ်း
အိပ်မက် တွေ ခဏခဏ မက်နေတယ်
ဘဝ အိပ်မက်ပဲလို့ ယုံကြည်နေပြီး
သူတို့ ချ ဆွေးနွေးတော့
အဝေးက ငြိမ်းချမ်းတဲ့ သူ့အိမ်လေးဆီ
ကောက်ပင်တွေ ရိတ်သိမ်းလို့ မပြီးသေးဘူးလေ
ကျမ ရင်းနှီး ပြုစုခဲ့ရတဲ့
ဘဝ အစိပ်အပိုင်း တခုကို
ဝမ်းတွင်း လေပြွန်ပိုက်တွေ ဖြတ်တောက်ပြီး
Posted by မသက်ဇင် at 6:52 PM
အမရေ ကျနော် ကောက်ပင်လေးတွေ လာကူရိတ်သိမ်းပေးမယ်..... အိမ်မြန်မြန် ပြန်နိုင်အောင်လို့
နေ၀င်ချိန် နှင်းဆီပျိုးခင်ထဲမှာတော့ လျှောက် ကိုလျှေက်ရ မှာပါ..ဒါပေမဲ့ ပစ္စုပန်ကို ပဲသိသိနေတဲ့ ခြေ လှမ်းတွေနဲ့ လေ။
ဆက်လက်တည်ရှိတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဆိုတာလေးက ကောင်းတယ်အစ်မရေ အဆင်ပြေပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေ အစ်မရေ။
နေ၀င်ချိန်တွေကို အကောင်းဆုံးဖြတ်သန်း ရင်ဆိုင်နိုင်ပါစေ နော်
အိမ်အမြန်ဆုံး ပြန်လို့ရအောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ မကြီးသက်ဇင်
အစ်မတစ်ယောက် အိမ် အစစ်ကို တည်ဆောက်နိုင်ပါစေ ။
နံရိုးနှစ်ချောင်းနဲ့ သွယ်ဆက်တည်ဆောက်ထားတဲ့ အိမ် ....
သူ့အတွက် ပေးဆပ်တော့မယ့် ဘဝတစ်ခု ....
ရတ်သိမ်းပြီးသွားတဲ့ ကောက်ပင် ....
ဆာလောင်မှုတွေအတွက် ဖြတ်တောက် သွယ်ဆက်ထားတဲ့ ရင်ခုန်သံတစ်စုံ ....
အားလုံးရဲ့ ကြားမှာ အသက်ရှည်ရပ်တည်နေမယ့် သူမ ....
လျှောက်လှမ်းရမယ့် အနာဂတ်ဘဝတစ်ခုအတွက် ကောက်ပင်ရိတ် လယ်သမားတစ်ယောက်ရဲ့ ဘဝခရီး တစ်ခုနဲ့ ထင်ဟပ်ပြသသွားတာ မှင်သက် သဘောကျမိပါရဲ့ ....
အမရေ.. ကဗျာလေး ဖတ်သွားပါတယ်...
အမတစ်ယောက် ရည်းမှန်းထားတဲ့ အတိုင်းပြည့်ဝပါစေ...
3:19 AM PDT
အမရဲ့  ကဗျာလေး အရမ်းကောင်းတယ်။ ကျနော်ကြိုက်တယ်။ အဓိပ္ပါယ်အရမ်းပြည့်ဝတဲ့ ကဗျာလေးတစ်ပုဒ်ပါ။ အမက မရေးလိုက်နဲ့ ရေးလိုက်ရင် ရှယ်တွေချည်းဘဲ။
အကြာကြီးနားမနေနဲ့နော်။ ဆက်ရေးဦး။ ကျနော် စောင့်ဖတ်နေမယ်။
ဆာရီယာယ်လစ်ဇမ်ကြေညာစာတမ်းကို ထုတ်ပြန်တယ်ဆိုတာဟာ ဆာရီယာယ်လစ်ဇမ် ကြေညာစာတမ်းကို ယုံကြည်စွာရွေးချယ်လိုက်တယ် ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ပဲပေါ့နော်။ အများကြီးအားရပါတယ်။ ဂုဏ်ယူမိပါတယ်။ အခက်အခဲကို ကိုယ်ချင်းစာမိတယ်။
အစာအိမ်က ရင်ခုန်သံဆီ ဆက်သွယ်ပေးပါ့မယ်"
ဆိုတာမျိုး တကယ်တမ်း သူတို့ လုပ်ပေးနိုင်မလား။
ဒါလေးကိုတွေ့တော့ ရှယ်လီရဲ့ ကမ္ဘာကျော်စာသားကို သတိရတယ်။
"The desire of the moth for the star,
of the night for the morrow"
အိပ်မက်ကို ပယ်အပ်တယ်လို့ မယူဆသေးရင်
မမက်ကောင်းတဲ့ အိပ်မက်ရယ်လို့ ရှိပါသေးသလား။ စိတ်ကူးကို မယဉ်အပ်တဲ့အရာလို့ မယူဆသေးရင် မယဉ်သင့်တဲ့စိတ်ကူးရယ်လို့ ရှိပါသေးသလား။
အေးလေ.. ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်..မိသားစုပျောက်နေတဲ့ ရွက်ကျပင်ပေါက်လေးတွေဟာ နှင်းဆီနီရဲ့ရယ်သံကို မျှော်လင့်နေပါတယ်။
ကြေညာစာတမ်းသာ အထည်ဒြပ်ဖြစ်လာရင် အစ်မငယ်အတွက် ပိယေဟိပိပ္ပယောဂေါ ဒုက္ခောဆိုတာ ဘယ်တော့မှ ရှိမှာမဟုတ်သလို အပိယေဟိသမ္ပယောဂေါဒုက္ခောလည်း ရှိတော့မှာ မဟုတ်ပါ။
လောကမှာ ငိုတဲ့လူများတယ်။ ရယ်တဲ့လူက နည်းတယ်။ အရင်းစစ်ကြည့်တော့ ရယ်ဖို့သာ မကြိုးစားခဲ့ကြရင် လူတိုင်းဟာ တနည်းမဟုတ် တနည်းနဲ့ ငိုနေကြရမှာဖြစ်တော့တယ်။
စိတ်နာအောင်သာ တွေးကြစတမ်းဆိုရင်လည်း ငယ်တုန်းကခလုတ်တိုက်ခဲ့တာလေးတွေဟာ အသည်းခိုက်အောင် နာစေနိုင်တဲ့ဇာတ်လမ်းတွေပါပဲ။
ကဗျာလေးကိုဖတ်ပြီး ကျနော့်နံရိုးတွေ ခိုင်မခိုင်ပြန်စမ်းကြည့်မိတယ်။ ဗိုက်ဆာနေတဲ့ နံရိုးတွေဟာ အထဲကိုချိုင့်ဝင်သွားတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျိုးမသွားဘဲ ပြန်ကန်တက်လာတယ်။
သြော်...ဥပေက္ခာနဲ့ယှဉ်တဲ့ ကရုဏာကိုသာ ထားနိုင်ခဲ့ကြရင်..
အားလုံးကတော့ အိမ်ပြန်ချင်တာပါပဲ အစ်မရယ်..။
မွေးနေ့ဆုတောင်းအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ..း) .. အမပေးတဲ့ ဆုတွေနဲ့ ပြည့်စုံပါရစေ ..
ကဗျာလေးလည်း အရမ်းကြိုက်ပါတယ် ..
ညီမလည်း အိမ်ပြန်ချင်တယ် ..
လယ်သမားကြီးကတော့ ငြိမ်းချမ်းနေမယ်နော် .. ကိုယ့်မိသားစု ကိုယ့်ဝန်းကျင်မှာ ကိုယ့်ဘာသာစကားကိုပဲပြော ..
ညီမတို့မှာတော့ မိသားစုနဲ့ဝေး ကိုယ့်နဲ့ အစပ်မတည့်တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ နားမလည်တာတွေ နေ့စဉ်နားထောင်နေရတယ် .. ငြိမ်းချမ်းချင်တယ် အမရယ် ..
တီတီဇင်ရေ... ကောက်ပင်တွေကို မြန်မြန်ရိပ်သိမ်းကြမယ်...ဒါမှ အိမ်ကို မြန်မြန်ပြန်လို့ရမှာ... ပြီးရင် နှင်းဆီစိုက်ခင်းထဲမှာ တီတီ့ကိုစောင့်နေမယ်..... ပျားရည်ပုလင်းနဲ့ အရိမဒ္ဒနကိုခေါ်ခဲ့နော်.... စောင့်နေမယ်..း)
ကဗျာလေးက တော်တော်ကောင်းတယ်နော်...တီတီ... တီတီဇင်လည်း အိမ်မြန်မြန်ပြန်နိုင်ပါစေ...တနေ့ကျရင် ပုဂံမြေမှာ ပြန်ဆုံကြတာပေါ့နော်... တီတီဇင်... :)
အခါခါ ဆန်းစစ်နေတဲ့ င့ါရဲ့စိတ်တွေ ..
အစိတ်အပိုင်း တစ်ခု ဖြစ်တည်ခြင်းနဲ့
အဲ့နေရာလေးကိုပိုကြိုက်တယ်မဇင်ရေ ရှင်းရှင်းလေးနဲ့ အဓိပါယ်တွေအများကြီးနဲ့ပြီးပြည့်စုံနေသလိုပါပဲ ငြိမ်းချမ်းစွာဖတ်ရှုသွားပါတယ်မဇင်
ဘယ်နေရာကို ကောင်းတယ်ပြောရမှန်းတောင် မသိတော့ဘူး မမ ....... အားလုံးက အဓိပါယ် အပြည့်နဲ့
ဖတ်လို့ မဝလို့ နှစ်ခေါက်တိတိ လာဖတ်သွားပါတယ် မသက်ဇင်ရယ်
လူသစ်ကလေး သမိုင်းကြောင်းစိတ်ဝင်စားသူကျွှန်တော်အတွက်တော့ မကြီးအိမ်က ဖတ်စရာတွေ တပုံတပင်ပါပဲ။အရင်ကဆို ဟိုရှာဒီရှုာနဲ့ပေါ့။တွေ့လိုက်ရင်လည်း အင်္ဂလိပ်လိုတွေချည်း။အခုတော့ သောက်လို့မကုန်နိုင်တဲ့ ရေအိုးကြီးလိုပါပဲ။ရေဆာတိုင်း လာသောက် လာသောက်နေပါတယ်။မကြီး ကျမ်းမာပါစေ.....
သြော်....ဒါနဲ့ ...အမေစု အတွက် ရည်ရွယ်ပြီး တင်ထားတာလေးကို လာအားပေးတဲ့အတွက်
အသစ်မရှိတော့ စီဘောက်စ်မှာ ရေးသွားရတာ အားနာလိုက်တာ၊
ကျွန်တော်တော့ အခြေခံနည်းတော့ ဖြေးဖြေးဘဲ ဖတ်မယ်နော်၊
တိုက်စား ဖျက်ချန်ထားရမယ့် မြစ်ကျိုးအင်း
အရိုးဖြောင့်ဆုံး ဆင်းရဲတတ်တဲ့ ဘ၀တစ်ခုလောက်
ဘယ်ကောင်းကင်မှ သောက ကင်းကင်း ကြယ်မစုံဘူး။
ရည်ရွယ်ချက် ခံစားချက်တူတဲ့ ကျတော့ကဗျာလေး လက်ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်...
ခံယူချက်တွေကတော့ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ဘယ်တူနိုင်ပါ့မလဲ နော်..
ဟို့း့့့ အဝေးက
ကျမလည်း ပြန်ချင်ပါရဲ့့့ 
ငြိမ်းချမ်းတဲ့ အိမ်လေးဆီ ပြန်နိုင်ပါစေ
ဘာလို့မှန်း မသိဘူး အဲဒီ အပိုဒ်လေးကို အကြိုက်ဆုံးပဲ
Great Poem.. and Great Poet!
ရောက်ပါတယ် အမရေ... ဘာပြောရမလဲ သိပါဘူး ။..ကျနော် ဝေဖန်လိုက်ရင် အရသာ ပျက်မှာဆိုးတယ်။
နောက်လဲ ကဗျာလေးတွေ ဖတ်ဖို့မျှော်နေမယ်..နော်
အမတစ်ယောက် တရားလာနာတဲ့အတွက် သာဓုခေါ်ပါတယ်...
နာတဲ့အတိုင်းလည်းသိ.. သိတဲ့အတိုင်းလည်း ကျင့်ကြံနိုင်ပါစေ အမ...
ကဗျာထဲကအတိုင်း.. အမ.. လိုအင်ဆန္ဒတွေ ပြည့်ဝပါစေ...
သူအိမ်လေးဆီကို အမြန်ပြန်ရောက်ပါစေ အစ်မရေ ။
ကောက်ပင်တွေ ရိတ်သိမ်းလို့ မပြီးသေးဘူးလေ့့့ 
မ ကို သနားနေတယ်။နောက်ပြီး နားလည်ပေးတယ်
မ.. ကျတော် မရဲ့.. CBox ကိုရှာလို့ မတွေ့ ဘူးဖြစ်နေတယ်... မ...အရာရာ မှာ အဆင် ပြေ ပါစေလို့ 
ဆုတောင်းပေးလိုက် ပါတယ် ဗျာ.....
မင်္ဂလာပါ အမ ..
နေကောင်းတယ်နော် ။ စာမေးပွဲတွင်းမို့ ဘယ်မှ မရောက်ဖြစ်ဘူး။ အချိန်ရသလောက် စာတွေ ဖတ်သွားပါတယ် ခင်ဗျာ။
ရောက်ပါတယ်။။။ကျတော်ရဲ. ဘလော့ဒ် မှာ လင့်(ခ်)လေးချိတ်ထားပါတယ်...း)အားကျလိုက်တာ။။။
စွန့်ဝံ့သူရဲ့နှလုံးသားကို လေးစားစွာနဲ့ ထပ်လာကြည့်တယ်
ကျွန်တော်တို့ပြန်ရမယ်...ပျော်ရွှင်ငြိမ်းအေးတဲ့ သီချင်းလေး ဆိုပြီးပြန်ကြတာပေါ့...အဲဒီ့နေ့ရောက်လာမယ်..။
အမရေ အလုပ်တစ်ဘက်၊ လူမှုရေးတွေတစ်ဘက်နဲ့မို့ပါ အခုတော့ မိုးရွာတာကိုကြည့်ပြီးခံစားချက်လေးရေးထားတယ် ဆက်ရန်ကတော့ အဟဲ ဆက်ပါဦးမည်ပေါ့း)
အို အိုး ....
တော်တော်လေး ပဲ အမ ရေ .. တော် တော်ေ လးပဲ
နှင်းဆီခင်းထဲ လမ်းလျှောက်နေရသလိုပဲ အမ ရေ
အရမ်း ခံစားရတယ် ။
အစ်မ ကျနော် ရောက်တယ် ...
စာမေးပွဲ တွေ ဖြေနေရလို့ ဘယ်မှကို မရောက်ဖြစ်ဘူး အစ်မရေ ...
ဆန္ဒဆိုတာတော့ ပြည့်တယ် ဆိုတာ မရှိတဲ့ အတွက် ငြိမ်းအေးပါစေလို့ပဲ ဆုတောင်းပေးပါတယ် အစ်မ .. :)
လာရင်တွေ့မယ်နော် .. တွေ့ခွင့်ရမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ် ..
ကောက်ပင်တွေဝိုင်းရိတ်ပေးမလို့ပါပဲမမရယ် အဟဲ လာတာနောက်ကျသွားတော့ ကုန်တောင်ကုန်နေသလောက်ပါပဲနော် ဘာမှဖြစ်ဘူးနော် မီးလေးအိမ်မှာ ခေါက်ဆွဲကြော် အ၀လာစားနော် စားပွဲရှိတယ် လာဖိတ်တယ်မမသက်ဇင်ရေနော်
လိုရာဆန္ဒ ပြည့်ဝပါစေးD
ကောက်ပင်တွေ ရိတ်သိမ်းလို့ မပြီးသေးဘူးလေ့့့ "
အားလုံးလည်းကောက်ပင်တွေ မြန်မြန် ရိတ်သိမ်းချင်နေ ကြပြီ လေ၊၊
C-Box မတွေ့လို့ဒီမှာ ပြောခဲ့ပါတယ် ၊၊ အစ်မဘလော့ လေး ကျွန်တော် လင့်ထားမယ်နော် ၊၊ တကယ်လို့ အားရင်လည်း စာလာဖတ်ပြီး ၊ မျှဝေပေးပါအုံး ၊ လိုအပ်တာလေးတွေ လည်း ပြောပြခဲ့ပါအုံး လို့ လေးလေးစားစား တောင်းဆိုပါတယ်နော် ၊၊
အစာအိမ်က ရင်ခုန်သံဆီ ဆက်သွယ်ပေးပါ့မယ်
အကြိုက်ဆုံးပဲ.. နူးညံ့ခြင်းတွေနဲ့ ပုံသွင်းထားတဲ့ ကဗျာစာသားတွေရဲ့အား.. သိမ်မွေ့နေတယ်ထင်ပေမယ့် ဘာနဲ့မှမတူတဲ့ အားအင်မျိုးတွေ တွေ့ရတယ် မသက်ဇင်ရေ.....
ကျွန်တော် blog ထဲကို မဝင်ဖြစ်တာ အတော်ကို ကြာခဲ့ပြီ..
အစ်မ ရဲ့ ကဗျာကို ကျွန်တော် လာဖတ်သွားပါတယ်...
ဘဝရသ တချို့ ရဲ့ စီးဝင်နေမှုကို တွေ့ရတယ်..
အစ်မရဲ့ ရင်ထဲက တမ်းချင်း တခု ထင်ပါတယ်..
ဆည်းဆာလှလှလေးကို နင့်နင့်နဲနဲ ဖြစ်အောင်ကို လှမ်းမြင်လိုက်ရတယ် အမ ..!
အမ အတွက် အလှဆုံး နှင်းဆီတွေ လာပေးမယ်
6:08 PM PST
အစ်မဒီဇင်ဘာရောက်လာရင် တွေ့ခွင့်ရလိမ့်မယ်လို့ မျော်လင့်ပါတယ်....
အစ်မရေ အဝေးရောက်နေသူတွေက အိမ်ပြန်ချင်ကြတာ တော့ ထုံးစံပေါ့နော်။
ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ကို အခြားသူတွေက ဆပ်မကုန်နိုင်လောက်အောင် ၀ဋ်ကြွေးနဲ့ သိမ်းပိုက်ထားတာ ဆိုတော့ အပေါင်မဆုံးခင် ပြန်ရွေးနိုင်မှ အစ်မလွမ်းတဲ့ အိမ်လေးကို ပြန်လို့ရမှာပါ။
ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ် အိမ်နဲ့ဝေးနေရင်တော့ အိမ်ပြန်ချင်ကြတာပဲပေါ့။
အစ်မရေးတဲ့ကဗျာလေးဖတ်ပြီး ရင်ထဲမှာ နင့်သွားတာပဲ ကဗျာကောင်းလေးအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
comment ပေးသွားတဲ့လူတွေရဲ့ စာတွေကိုဖတ်ရတာကိုက အရသာရှိလိုက်တာ အစ်မရဲ့ ကဗျာလေးကို ပိုအသက်ဝင် ရင့်နင်စေရပါတယ်။ ကဗျာလေးတွေ ထပ်ပြီးမျှော်နေပါတယ်။
ဘ၀ ဆိုတာကိုက ...
အိပ်မက်တစ်ခု မဟုတ်ဘူးလား အစ်မရေ ...
ကဗျာဖတ်သွားပါတယ် အစ်မ သက်ဇင် ခင်ဗျ.
တွေးကြည့် ပြီး အဖြေကို( လေးနက်)၂ စဉ်းစားလိုက်အုန်းမယ်ဗျ
Hi there, You've doneagreat job. I'll definitely digg it and for my part recommend to my friends. I'm sure they will be benefited from this web site. capitalone.com login